रोशी र महाभारतमा भएको बम बिस्फोटको कुरा हल्ला मात्रै भएको एस्.पी. सापकोटाको भनाई – Radio Roshi
जिल्लाको रोशी गाउँपालीका र महाभारत गाँउपालीकामा आज बम बिस्फोट भएको भनि खबर आएको कुरा हल्ला मात्रै भएको प्रहरीले जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यलय काभ्रेका एस्.पी. जयराज सापकोटाले रेडियो रोशी संग बोल्दै बम पड्कििएको भन्ने सुनिएको छ, तर काँहा कति भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छै्रन भनेका छन् । चन्द समुहले त्रास फैलाउन प्रयास गरेको बताउदै हल्लाको पछि नलाग्न भनेका छन् ।
रोशी र महाभारतको सिमानामा रहेको बुढाखानीमा बम बिष्फोट भएको भनि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरे पछि, लगतै मंगलटारबाट प्रहरीको टोली त्यस तर्फ प्रस्थान गरेको थियो । “बिस्फोट भएको भनिएको छ तर अहिले सम्म बम फेला पार्न सकेका छैनौँ” उनले भनेका छन् । अहिले प्रहरीको टोली त्यहाँ पुगेको र अनुसन्धान भईरहेको उनको भनाई छ । यता, नेत्र बिक्रम चन्द विप्लब नेत्रित्वका जिल्ला सचिव दर्शन लामाले दुई गाँउपालीकाका जनप्रतिनिधिहरुको राजिनामा माग गर्दै गाँउपालीकाको विभीन्न स्थानमा बम बिस्फोट गराईएकोे बताएका छन् ।